allsanaag.com - Maleeshiyaadkii Muqdisho oo mid ka mid ahaa is qarxiyey
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3205	Days	22	Hours	18	Minutes	47	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Maleeshiyaadkii Muqdisho oo mid ka mid ahaa is qarxiyey
Written by khalid	Cali Cabdi Xareed oo ka mid ahaa Saraakiisha Ciidanka ayaa isku qarxiyey Albaabka RW Soomaaliya . Laakiinse Culusoow iyo Xulafadiisu waa inkireen sarkaalkan Villa Soomaaliya isku qarxiyey in uu ka mid ahaa Maleeshiya Beeleedka Muqdisho laga qoro Taliyaha Nabadsugida gobolka Banaadir Col. Khaliif Axmed Ereg ayaa khilaafay hadal uu maanta saxaafadda siiyey wasiirka warfaafinta dawlada Soomaaliya C/laahi Ciilmooge Xersi oo uu ku sheegay in ninkii saaka isku qarxiyey Albaabka xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya uu ahaa nin ka tirsan ciidamada nabadsugida dawlada.
Cali Cabdi Xareed, oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka nabad sugida Soomaaliya ayaa saaka isku qarxiyey afka hore ee Villa Soomaaliya isaga oo doonayey in uu khaarijiyo RW Soomaaliya Cabdi Faarax, wuxuu dilay Askari ka mid ah ilaalada R'isawasaaraha isaga oo sidoo kalena dhaawac gaarsiiyey shan kale.
Sarkaalkan ka midka ah Ciidanka Beelaha Muqdisho oo lagu sheego in ay yihiin Ciidan qaran,ayaa maalmo ka hor waxa uu ka mid ahaa kooxda Alshabaab , hase ahaatee waxa lagu daray Maleeshiyaadka la qorayo oo la doonyo in Caalamka la tuso si cunaqabataynta hubka Soomaaliya looga qaado.
Taliyaha Nabadsugida Gobolka Banaadir Ereg, oo qarinaya siyaasada Madaxweyne Xasan Culusoow ee Ciidamada Soomaaliya lagu qorayo ayaa yiri sidan, isaga oo beeninaya in ninkii is qarxiyey uu ka mid ahaa saraakiisha Ciidanka. "Ninkan kama tirsaneyn ciidamada nabadsugida, wuxuu ka soo baxsaday Al Shabaab, wuxuu ahaa nin Al Shabaab ah oo dawlada isu soo dhiibay, wuxuuna iska soo dhiibay Wanlaweyn bishaan 14-keeda, waxaana uu ku jiray xerada Sarendi oo lagu dhaqanceliyo kooxaha ka soo goosta Al Shabaab.” ayuu yiri taliyaha hay’adda nabadsugida ee gobolka Banaadi"
Villa Soomaaliya oo ay ilaaliyaan ciidamada Afrikaanka ee AMISOM, suurtagal ma aha in nin dhaqan celis ah oo Xero Ciidan ku jira , inta uu xerada ka soo baxo, horayna u soo qaato waxyaabaha qarxa in uu gudaha u soo galo villa soomaaliya ,isaga isku qarxinaya albaabka hore ee xafiiska RW Soomaaliya, taasina waxay kuu cadaynaysaa in hadalka taliyuhu uu been yahay oo isaga naftiisu horay u ahaan jiray Mooryaantii Muqdisho.